တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်တဲ့ အလှကုန် ကုန်စည်ပြပွဲကို ဘာကြောင့်သွားသင့်တာလဲ? | CosmeticMyanmar
Home » Article » တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်တဲ့ အလှကုန် ကုန်စည်ပြပွဲကို ဘာကြောင့်သွားသင့်တာလဲ?
တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်တဲ့ အလှကုန် ကုန်စည်ပြပွဲကို ဘာကြောင့်သွားသင့်တာလဲ?
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို အလှကုန်ပစ္စည်းများစွာနဲ့ brand မျိုးစုံ ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ မဝင်ရောက်နိုင်သေးတဲ့ brand များစွာလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ နိုင်ငံတကာမှ အလှကုန်များစွာကလည်း ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အသုံးဆောင်ကုန်စည်မျိုးစုံနဲ့ အလှကုန်မျိုးစုံကို ပြပွဲအနေနဲ့လည်းကောင်း မိတ်ဆက်ပေးတာတွေ ပြသပေးတာတွေ ဆွေးနွေးပေးတာတွေကို စတင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်တလမ်းကနေ ကျယ်ပြန့်လာအောင် လမ်းဖွင့်ပေးတာလို့လည်း ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Cosmetic Myanmar ကလည်း CM ပရိတ်သက်တွေအတွက် ၂၈ မှ ၃၀ ရက်နေ့ထိ Rose Garden Hotel မှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ Beauty Connect Expo ကို သွားရောက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစကတော့ Cosmetic တွေချည်းဘဲ ရှိမယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတာပါ။ တကယ်ရောက်သွားမှ cosmetic တွေတင်မကဘဲ Beaty Clinic လိုနေရာမျိူးတွေမှာဘဲ တွေ့နိုင်တဲ့ အသားဖြူထိုးဆေး၊ သောက်ဆေးအပြင် Stem Cell နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတွေ၊ တခြားအလှကုန်ဆေးအမျိုးမျိုးကိုပါ လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဆေးတွေကို ရာခိုင်နှုန်းပြည့် စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ ဂျာမဏီ၊ ကိုရီးယား၊ ပြင်သစ်အပြင် တခြားနိုင်ငံအသီးသီးမှ လာရောက်မိတ်ဆက်ပြသနေတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရသေးပါ။ ဒီဆေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ သေချာရှင်းပြနိုင်တဲ့သူရှားပါးတဲ့အတွက် ဒီလိုပွဲမျိုးကို သွားလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ Company ရဲ့ CEO, Manager တို့အပြင် ပစ္စည်းအကြောင်းကို သေချာရှင်းပြ/ပြောပြနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါ တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးလို့ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြပွဲမှာလာရောက်ပြသကြတဲ့ company တော်တော်များများကတော့ ဒီနိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကိုယ်စားလှယ် ရှာတာမျိုးဆိုတာကိုလည်း သိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီလိုပွဲမျိုးကို အလှကုန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူငယ်တွေတင်မက အလှကုန်စီးပွားရေးကုမ္မဏီကြီးတွေအနေနဲ့ပါ သွားရောက်လေ့လာသင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်။
ဆေးတွေအကြောင်းပြီးပြီဆိုတော့ cosmetic တွေအကြောင်းကို နည်းနည်းလေးသွားမယ်နော်။ ပြပွဲမှာတွေ့ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ဒီနိုင်ငံမှာမရှိသေးတဲ့ Cosmetic ပစ္စည်းများစွာဖြစ်တာကြောင့် ပစ္စည်းအသစ်တွေကို လေ့လာလို့ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင် ကိုရီးယားအလှကုန်ပစ္စည်း တွေကိုပါတွေ့ရအုံးမှာပါ။ တာဝန်ရှိသူ ဝန်ထမ်းများနဲ့လည်း ပစ္စည်းအကြောင်းကို သေချာမေးမြန်းစူးစမ်းလို့ရနိုင်ပြီး သဘောကျလို့ ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Sample package တွေကိုပါ ဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းမဝယ်ခင် tester များလည်းထားပေးထားလို့ စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်လို့လည်း ရပါသေးတယ်။
ဒါဆို နောက်ထပ်ဘာတွေတွေ့နိုင်အုံးမလဲ ဆက်သွားမယ်နော်။ Beauty Connect Expo ဆိုတဲ့အတိုင်း မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် အလှရေးရာနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ပိုးထည်၊ ချည်ထည်၊ ရပ်ကန်းထည်တွေကိုပါ တွေ့ရအုံးမယ့်အပြင် ရပ်ကန်းရပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တွေပါ တွေ့ရအုံးမှာပါ။ ဒါတွေတင်မပြီးသေးဘူးနော်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အပေါ်/အောက် အတွင်းခံတွေကိုပါ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ လာရောက်ရောင်းချတဲ့ company တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ Beauty မှာ ဒါကလည်း အဓိကအရေးကြီးတဲ့ ဂရုစိုက်ရမယ့် ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစုံလင်လှတဲ့ပွဲမျိုးကို အသွားကြီးသွားပြီး မတန်ဘူးဆိုတဲ့ feeling မျိုး မဖြစ်စေရဘူးဆိုတာ အာမခံပါတယ်။ တကယ်သွားရောက်လေ့လာသင့်တဲ့ ပွဲမျိုးပါ။
ဒါနဲ့ မပြီးသေးဘူးနော်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ Winner Sport ကလည်း သူတို့ရဲ့ Gym နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စက်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုလည်း ဝင်ရောက်ပြသပါသေးတယ်။ ကိုယ်ကမဝယ်ဖြစ်တောင် လေ့လာစူးစမ်းကြည့်လို့ ရနိုင်တာပေါ့။ Body Fitness လို ဆိုင်မျိုးဖွင့်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ တိုက်ရိုက်လေ့လာလို့ ရနိုင်တဲ့အခွင့်ရေးတခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖန်တီးတာတွေစိတ်ဝင်စားရင် သီးသန့် hall ထဲမှာ Hair Stylist နာမည်ကြီးဆရာ ချန်းလုံရဲ့ ပြပွဲလည်းကြည့်လို့ရသေးတယ်နော်။ Model များစွာနဲ့ ဆံပင်ပုံစံများစွာကို ဖန်တီးပြသပေးတဲ့ Show မျိုးကို တွေ့ရအုံးမှာပါ။ ပွဲနဲ့မလှမ်းမကမ်းနေရာမှာတော့ ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Tool တွေ Hair care ပစ္စည်းတွေ ရောင်းချနေကြလို့ စိတ်ပါရင် လေ့လာပြီးဝယ်လို့လည်း ရသေးတယ်။ မိန်းမတယောက်ရဲ့ Beauty နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံတစ်နေရာထဲမှာ လေ့လောလို့ရတာကြောင့် တကယ်ကို ပြည့်စုံတဲ့ ပွဲမျိုးပါ။ ဒီလိုပွဲမျိုးကို တစ်နှစ်မှာတစ်ကြိမ် တစ်ကြိမ်မှာ ၃ရက်လောက်ဘဲ ကျင်းပတယ်လို့လည်း သိခဲ့ရပါတယ်။ နောက်နှစ်နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ကျင်းပပြုလုပ်အုံးမှာဖြစ်လို့ Beauty Connect Expo Myanmar လို့ ကြားလိုက်/သိလိုက်တာနဲ့ အပြေးလေး လေ့လာစူးစမ်းကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်နော်။ ပွဲရဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်း တခါတည်းကြည့်လို့ရအောင် ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မျက်နှာကို စနစ်ကျကျ နည်းမှန် လမ်းမှန် သန့်စင်မယ် ဆိုရင်
Tags: Beauty Connect Expo Myanmar